Suuriya: Hogaamiye jabhad Islaami & 11 kale oo qarax lagu dilay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Suuriya: Hogaamiye jabhad Islaami & 11 kale oo qarax lagu dilay
Mareeg.com: Hogaamiyaha Jambahada Axraar Shaam, Xasaan Cabuud ee dagaalka kula jirta nidaamka Suuriya ee hogamiyo Bashaar Al-asad ayaa lagu dilay qarax isago 11 kale oo saraakiil sarsare ah. 50 kale ayaa ku dhaawacmay weerarkaas.
Qaraxan ayaa waxaa geystay qof ismiidaamiyey oo galay guri saraakiishaasi ku sugnaayeen oo ku yaalla magaalada Raam Xamdaan ee gobolka Idlib ee woqooyi galbeed Suuriya.
Weerarka ayaaney weli cidina sheegan, waxaase laga shaki qabaa iney geysteen dagaalyahanada dowladda Islaamiga ee maamula qeybo ka mid ah Suuriya iyo Ciraaq.
Jabhadda Axraar Shaam ayaa bar ay ku leedahay Twitter-ka ku xaqiijisey in hogaamiyahooda Xasaan Cabuud iyo 11 kale lagu dilay qaraxaas ismiidaaminta ah.
Axraar Shaam ayaa ka mid ah Jabhadaha ugu awooda badan ee dagaalka kula jira hogaamiyaha dalka Suuriya, Bashaar Al-asad.
Axraar Shaam ayaa qeyb ka ah 7 jabhadood oo ki midoobay dallada Jabhadda Islaamiga ah, kuwaasoo la dagaallama Bashaar Al-asad.
Sidoo kale, Axraar Shaam ayaa dagaal kula jirta Dowladda Islaamiga ah ee uu hogaamiyo Abuubakar Al-baqdaadi oo xukunta qeybo ka mid ah Suuriya iyo Ciraaq.
Jabhadda Islaamiga ah ee Axraar Shaam ayaa horay ugu eedeysay dowladda Islaamiga ah iney ka dambeysay dilka hogaamiye ka tirsanaa Axraar Shaam oo la oran jiray Abuu Khaalid Al-suuri, kaasoo qarax nuucaan ah lagu dilay bishii Febaraayo ee sanadkan 2014.
Hogaamiye Xasaan Cabduud ee shalay oo talaado ah la dilay ayaa wareysi uu bishii June siiyey BBC ku sheegay in dowladda Islaamiga ee horay loogu yaqaanayu Daacish ay suurad aad u xun ka bixisay Islaamka.
Dilka Cabuud ayaa yimid xilli Mareykanku uu xulafo u raadsanayo dagaal baahsan oo ka dhan ah dowladda Islaamiga ah, isagoo Suuriya ka uruursanaya kooxo la dagaalama Dowladda Islaamiga ah, hase ahaatee waxaa adag in Axraar Shaam oo ah Jabhad Islaami ah ay ka qeyb qaadato olole Mayreykanku horkacayo.
Somaliland oo sameysatay baasaboor cusub (Sawirro)